गीता कपुरको बिहेको चर्चा किन चल्यो ? - Sidha News
गीता कपुरको बिहेको चर्चा किन चल्यो ?
सामाजिक संजालमा बलिउडकी सफल कोरियोग्राफर गीता कपुरले सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको तस्वीर शेयर गरिन् । उनको यो तस्वीर सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । धेरै फ्यानले उनलाई बिहे गरेकोमा वधाई समेत दिन भ्याए ।
मिडियामा भने गीता कपुरको सिउँदोको राजको बिषयमा खुबै चर्चा भयो । बिहेको चर्चा चलेपछि गीता कपुरले भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै आफूले बिहे नगरेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले आफूले बिहे गरेको खण्डमा नलुकाउने पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
४७ बर्षकी गीताले अहिलेसम्म बिहे गरेकी छैनन् । तर, उनलाई धेरैले आमा माता भन्ने गरेका छन् । बलिउडका सफल चलचित्रहरु ‘कुछ कुछ होता हे, दिल तो पागल हे, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बते, कल हो ना हो, मै हुँ ना, ओम शान्ती ओम’ जस्ता चलचित्रमा गीताले निर्देशक तथा कोरियोग्राफर फराह खानको सहयोगीत भएर पनि काम गरेकी छिन् ।